January 26, 2021 Xuseen 10
Puntlandtimes (Muqdisho)-Wasiirka Wasaaradda Maaliyada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ka hadlay mar kale arrimo la xiriira qaadka la keeno dalka Soomaaliya, kaasi oo ka yimaada dalka Itoobiya.
Wasiir Beyle oo muuqaal iska soo duubay ayaa waxaa uu ku sheegay in hadalkii shalay u sheegay si qaldan loo farisay, isla markaana uu ka hadlay oo kaliya qaadka hareeriga ah ee ka yimaada Itoobiya oo la xusay in uu xayiran yahay.
Wasiirka maaliyadda xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in aysan jirin cid sigaar ah uu ugu xayiran yahay qaadka hareeriga ah ee la keeno Magaalada Muqdisho, ayna soo dejisan karto cid kasta oo dooneysa inay ka ganacsato.
Wasiir maaliyeed mase drug dealer??
Burburkii somalia maxaa
Xukunkii iyo awodii dalku
Lahaa halmar ayuu gacanta
Ugalay dad moryaan ah oo
Somali galiyay qas iyo
Jahawareer oo xaataa dalkii
Wajikale uyaalay maxamed
Siyaad bare allaah UNAXARISTO
Waxaa uu ahaa nin wadani
Oo yaqaan xeerrarka somalidu
Kudhaqanto laakiin somalidu
Waxay ugadhagtay xukunkii
Dhibka kudhacay uu ahaa kuwii
Dowladii riday oo aan
Aqoon ulahayn maamul
Dowladeed oo waxa kali ah
Oo ay kumidysnayen waxaa
Aay ahayed in dowlada
Larido qorshe kale majirin
Hadaba somaliyay dalkii
Maanta waa sokabanayaa
Ee dalkiina illaalsad
Reer Muqdisho haddii ay doonayaan inay dersi u dhigaan Farmaajo iyo Abiy Axmed, ha qaaddaceen cunidda qaatka Hareriga ee Itoobiya. Yaa ku khasbi kara oo afka u galin kara?
Soomaalidu dagaalka keliya ee ay taqaan waa xabbad; dariiqooyin badan oo loo dagaallamo oo xabbadda ka dhib yar ayaa jira.
Wasiirka Qaadka.. maanta waxa uu xayaysiinayaa qaadka Ethiopia , waxa uu yiri yiri Qaadka Bii Axmad Oromo Amxaar ayaa ka marqaan fiican ka Uhuuru Kanyata.
waa xayaysiis yaab leh.
Wasiirka Qaadka.. maanta waxa uu xayaysiinayaa qaadka Ethiopia , waxa uu yiri Qaadka Abii Axmad Oromo Amxaar ayaa ka marqaan fiican ka Uhuuru Kanyata.
Waxaa meeshan ka cad, in uusan jirin Qaad awalba dalka laga joojiyaye, ee waxa kali ah ee meesha ka dhacay aay tahay, Daroogadii Kenya oo lagu beddelay tii Itoobiya!
Taas oo aay reer Farmaalajo ka lahaayeen labo ujeedo, kuwaa oo kala ah.
1- in la fuliyo Cadsi uu leeyahay Abii Axmed oo ah, in Qaadka Kenya lagu beddelo kan Itoobiya!
2- Iyo in suuqa cusub ee Qaadka Itoobiya uu noqdo mid u xiran reer N&N oo aanan aqoon hore u lahayn, suuqii la xannibay!
Ugu dambentii waxa meesha ka dhacay waa un Qaadleeydii hore oo suuqa laga saaray, iyo Qaadleey cusub oo Qori ku hubeeysan oo soo gashay!!!
Dowlad qaad ka ganacsaneeysa
yaa arkay tan ka hor?! Kkk
Mid Dumarka ka ganacsata horay bay noo soo martey, mid Ilkaha dadka ka ganacsatana aan sugno!!
Somali Democracy says:
Xukunkii dowladnimada dimuqraadiyada ee Soomaalida ku heshiisay waxuu gacanta u galay 1969 Militarigii oo ballan qaaday in Dimuqraadiyadii ku soo celin doono muddo dhaw ka dibna hogaamiyihii koxda Militarigii waxuu isu baddalay Dictatoor oo waddanka ku haystay gacan xoog ah iyo dhiig uu daadiyo waxuuna dowladda ka buuxiyay dad asaga daacad u ah maamul aqoon u laheen oo haddana hantidi qaranka xalaaleystay ka dib markii Ruuska eryay waxaa ku kacay qabiilada Soomaaliyeed ilaa xukunka dowladnimo gacantiisa ku burburiyay asagana naftiisa Nayjeeriya ula cararay.
Muddu ka dib Soomaalidi dib u soo sameysteen dwladnimadood ee dimuqraadiyadda ahayd oo meel eber ah laga soo qaaday ayaa afar sano ka hor loo dhiibay Farmaajo oo ah wiil uu Dictatoorkii nidaamkii dowladnimadii burburiyayuu adeer u yahay.
Taas oo ahayd gobnimada Soomaalida oo dambiga uu galay dictatoorkii kor ka saarin wiilkii uu adeerka u ahaa Farmaajo.
laakiin waxaa dhacay in Farmaajo la soo baxay dhaqankii adeerkii ee dictaatoornimadi. Soomaali wey taqaan si dictatoor loola dhaqmo laakiin waxaa nasiib darro ah in Farmaajo taariikhda waxba ka baran.
haddana arrintaan socoto xukun boobka ah fikirka Soomaalida waa laga tashanaa oo mustaqbalka waxey saameyn doontaa qabiilka ee ka soo jeedaan dictatoorkii iyo wiilka uu adeer u yahay.
farmaajo waa la tuura sida balaqi waddankana burbur ma galaayo taas bishaareysta kuwa dadka ku cabsiinaayo Farmaajo hadii xukunka laga qaado 1991.
1991 Qabiilda waxey wada deggnaayeen hal magaalo Muqdisha oo nidaamkii dictatoorka ahayd uu ka soo guuriyay shuuciyadda laakiin hadda qabiil walbo maamul bey leeyahii wey suurowdaa dad in eey dhintaan iska hor imaad daraadeed laakiin maamul ma dumaayo.
Mareexaana wallaahi waxaad maqli doontaa in eey naf ka raadiyaan Shaydaanka, dhagarta eey ummadda Soomaaliyeed ka galeen.
Somali Democracy kkkk
War been fara badan bay kugu soo Anqariyeene, yaa kaa masixi doono?! Kkkk
KKKKK Ma agoontii Kacaanki oo wax lagu soo akhriyay oo maskaaxdooda buuxsantay oo qurbo kasto eey tagaan dhaqanki ubaxa Kacaanka ka badal meynin maad ii maleysaa?
Welcome brother Post Kacaan Syndrome. KKKKKKK
Waar dee MARKHAANka wasiirka haka jiidhina!